Loza mety hitranga: noraràn'i Hong Kong ny sidina mpandeha rehetra avy any UK
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Hong Kong » Loza mety hitranga: noraràn'i Hong Kong ny sidina mpandeha rehetra avy any UK
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao Mafana Hong Kong • Vaovao • tompon'andraikitra • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao farany momba ny UK • Vaovao isan-karazany
Jona 29, 2021
Rehefa mitady ny hanafoanana ny fiparitahan'ny karazan-karazany vaovao amin'ny COVID-19 i Hong Kong, dia nosokajian'ny manampahefana SAR ny UK ho "risika be".
Ny olona izay nijanona tany Angletera nandritra ny adiny roa mahery dia hoferana tsy hiditra amin'ny sidina mpandeha mankany Hong Kong.
Hong Kong dia nanamafy ny tranga COVID variana Delta voalohany tany an-toerana tamin'ny herinandro lasa teo.
Tonga ny fandraràna ny sidina UK satria i Hong Kong dia mitady hampiato ny fepetra momba ny karantina ho an'ny ankamaroan'ny firenena hafa.
Nanambara ny governemanta Hong Kong ny alatsinainy teo fa ny sidina mpandeha rehetra avy any Angletera dia voarara tsy hiditra ao amin'ny Faritra fitantanana manokana ao Hong Kong manomboka ny alakamisy.
As Hong Kong mikasa ny hamehezana ny fiparitahan'ny karazana variana vaovao amin'ny COVID-19, ny manampahefana SAR dia nanasokajiana an'i UK ho "risika izaitsizy" noho ny "fiverenan'ny toe-javatra valan'aretina tany Angletera sy ny fihenan'ny viriosy Delta isan-karazany any".
Amin'ny fanasokajiana vaovao, ny olona izay nijanona tany Angletera nandritra ny adiny roa mahery dia hoferana tsy hiditra amin'ny sidina mpandeha mankany Hong Kong.
Nanamafy ny raharaham-pitsarana COVID miovaova Delta any an-toerana i Hong Kong tamin'ny herinandro lasa, ary namarana ny tranga tsy naharitra 16 andro.
Ny fameperana vaovao dia fanindroany izay nandraran'ny governemanta Hong Kong ny sidina avy any UK, taorian'ny famerana napetraka tamin'ny Desambra lasa teo.
Ny fandraràna dia tonga tao anatin'ny fihenjanana misy eo anelanelan'ny UK sy Shina momba an'i Hong Kong semi-autonomous.
Ny fandraràna ny sidina dia nateraky ny politika napetraky ny governemanta mba hisorohana ny fiovan'ny coronavirus any Hong Kong.
Ny fampiatoana ny sidina mpandeha dia ampiharina raha mpandeha dimy na maromaro tonga avy amin'ny toerana iray no manaporofo ny fahatongavany noho ny fiovan'ny coronavirus manokana, na ny fiovan'ny virus mifandraika ao anatin'ny fe-potoana fito andro.
Navoaka ihany koa ny fandrarana raha mpandeha 10 na maromaro avy amin'ny toerana iray no voamarina fa voan'ny virus coronavirus amin'ny alàlan'ny fitsapana rehetra, ao anatin'izany ny fitsapana natao nandritra ny quarantine, tao anatin'ny fe-potoana fito andro.
Ny UK dia nitatitra fa olona 14,876 no voamarina fa voan'ny coronavirus ny alahady teo, satria nahita fiakaran'ny aretina tato ho ato izy. Nanamafy tranga efatra tapitrisa mahery izy hatramin'ny nanombohan'ny valanaretina.
Hong Kong, izay am-bolana maro dia nametraka quarantine 21 andro noho ny fahatongavan'ireo ankamaroan'ny firenena ary nametraka fepetra henjana momba ny fanalavirana ara-tsosialy, dia nitatitra tranga telo vaovao momba ny coronavirus ny alatsinainy teo. Nanamafy ny tranga 11,921 XNUMX hatramin'ny nanombohan'ny valan'aretina.
Tonga ny fandraràna ny sidina UK satria i Hong Kong dia mitady hampiato ny fepetra momba ny quarantine ho an'ny ankamaroan'ny firenena hafa, anisan'izany i Etazonia sy Kanada.
Lehilahy voaheloka higadra 5 taona noho ny fanaparitahana COVID ...
Nanentana ireo masoivoho fitaterana amerikana ny FTA mba hampitombo ny vaksiny ...
Tanzania dia handray ny fizahan-tany lehibe any Afrika Atsinanana ...